Mukhtaar Rooboow Oo Ku Dhawaaqay in uu Yahay Musharrax Utaagan Xilka Madaxwyenaha Koonfur Galbeed.
Thursday October 04, 2018 - 13:49:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib Booqasho aan horay loosii shaacin oo uu maanta ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayuu Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur ku shaaciyay in uu yahay musharrax u taagan xilka madaxtinimada maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed.
Kumanaan qof oo isugu jira taageerayaashiisa iyo xubno katirsan maamulka 'Koonfur Galbeed' ayaa Mukhtaar Rooboow kusoo dhoweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Xabashida Itoobiya.
Rooboow oo meel fagaara ah kula hadlay dadkii soo dhoweeyay ayaa warbaahinta u sheegay in uu yahay musharax qeyb ka noqon doono baratanka loogu jiro cidda noqonayso maamuka dabadhilifka Koonfur Galbeed oo hadda uu majaraha u hayo Shariif Sakiin.
"Dhammaan dadka reer koonfur galbeed meel walba oo ay joogaan waxaan usheegayaa in codsi badan noola jeediyay codsigaas oo ahaa in aan isku sharaxno imaarada ama mas'uuliyadda Koonfur galbeed,waxaana idiin sheegayaa in aan tartami doono oo aan aqbalay codsigiina" ayuu yiri Mukhtaar Rooboow.
Wuxuu intaas ku daray in inta uu joogo magaalada Baydhabo uu kulamo farabadan qaban doono uuna latashan doono xildhibaannada iyo siyaasiyiinta maamulka Shariif Sakiin, Ninkan oo horay usoo noqday Afhayeenka Xarakada Al Shabaab ayaa bishii Agoosto ee sanaddii 2017 wuxuu isku dhiibay ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Xudur kadibna wuxuu usii gudbay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo halkaas oo uu saraakiil American ah kulamo kulasoo qaatay.
Ka hor is sharrixitaankiis ayuu Rooboow damaanad qaadyo ka helay waxa loogu yeero beesha Caalamka oo ku dhiiri geliyay in uu iskusoo taagan xilka madaxweynaha Koonfur galbeed taas bedelkeedna wuxuu uballan qaaday in haddii uu guuleysto uu xoojin doono dagaalka ay ciidamada Itoobiya uga jiraan gobollada Baay iyo Bakool ee ka dhanka ah Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Xarakada Al Shabaab ayaa horay uga hadashay isdhiibidda Mukhtaar Rooboow waxayna xarakada ku sifaysay Nin murtad ah oo safka muslimiinta ka baxay, sida muuqata Rooboow ayaa uhanqal taagaya jagooyin dadkaii qabtay uu horay ugu sheegi jiray in ay yihiin kuwa gaaloobay oo calmaaniyiin ah!
Mooshin xilka looga qaadayo Madaxweyne Donald Trump oo la gudbiyay.
Maxad kala socotaa inta uu la egyahay Keydka Hubka Sucuudiga, Maxaase keenay taag darada heysata ciidanka Sucuudiga [Video+Warbixin].
Yahuudda iyo Ururka 'Xisbullaah' oo xaalad deganaan ah ku dhawaaqay kadib markii ay madaafiic is dhaafsadeen.
Video+ Warbixin: Muxuu Salka ku hayaa loollanka dagaal ee ka holcaya Koonfurta Yemen?.
Ciidamada Xukuumadda Yemen oo la wareegay gacan ku heynta Gobollada Koonfureed.
Ugu yaraan 40 qof Shacab ah oo ku dhintay duqeyn Ka Dhacday Koonfurta dalka Liibiya.